RASMI: Garsooraha dhex-dhexaadin doona kulanka El Clasico ee dhexmari doona Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid oo la shaaciyey – Gool FM
Haaruun December 9, 2019
(Madrid) 09 Dis 2019. Waxaa la shaaciyey garsooraha seeriga u qaban doona kulanka El Clasico ee dhexmari doona kooxaha Barcelona iyo Real Madrid, kaasoo dabayaaqada bishaan ka dhici doona garoonka Camp Nou.
Garsoore Alejandro Hernandez Hernandez ayaa noqonaya midka dhex-dhexaadin doona kulanka El Clasico ee la ciyaari doono 18-ka bishaan aynu ku jirno ee December.
Kulankii ugu dambeeyey ee El Clasico oo uu garsoore ka ahaa Hernandez Hernandez waxa uu ahaa kulankii ay Barcelona 5-1 ku garaacday Real Madrid.
Kani waxa uu noqon doonaa kulankiisii shanaad ee El Clasico oo uu dhex-dhexaadiyo, afartii kulan ee hore Barcelona ayaa labo adkaaday, halka Real Madrid ay hal kulan guuleysatay, kulanka kalena ay barbaro galeen.
Garooraha kulankan aaladda VAR fadhin doona waxa uu noqonayaa Ricardo.